Ukusikwa kwe-Laser ye-Sublimation Sportswear, Izingubo Zokuqina, Izingubo Ezinyathelisiwe Zedijithali - Wuhan Golden Laser Co, Ltd
Ukusikwa kwe-Laser ye-Sublimation Sportswear, Izingubo Zokuqina, Izingubo Zokuphrinta
Ukusika i-Laser ukusika kwe-Sublimation Apparel Industry
Ijubane eliphezulu Ukundiza kuskena umqulu wendwangu ocashile futhi unake noma yikuphi ukugoba noma ukuhlanekezela okungenzeka ngesikhathi senqubo yokuqothula futhi usike ngokunembile noma imiphi imiklamo.
I-Dye-sublimation Trend yi-Driving Fashion, Fitness and Sports Clothing Industry.
Izingubo nezesekeli ezisetshenziselwa imfashini phambili, ekusetshenzisweni ngenkathi ngesikhathi esifanayo zinethezekile futhi zisebenza njalo. Izembatho ezifakiwe zinikeza konke lokho nokunye.
Isidingo sobuntu obuhlukile nomqondo wemfashini embonini yezingubo kufake isandla kakhulu ekuthandweni kwezingubo zokugqoka ezingaphansi. Hhayi imboni yezemfashini kuphela kepha nezingubo ezisebenzayo, okokugqoka kanye nezingubo zemidlalo kanye nezimboni zomfaniswano kuthathe indawo enhle kule ndlela yokuphrinta udayi-sublimation ngoba inika amathuba amakhulu okwenza ngokwezifiso ngaphandle kwemikhawulo yokwakhiwa.
Umbukiso wamakhasimende ethu
Ukusikwa kwe-Laser yezingubo zokuhambisa udayi
Ukusika kwe-Laser yisisombululo esithandwa kakhulu sokusika imboni yezingubo zemidlalo. Njengomhlinzeki we-laser oholayo embonini yezindwangu, iGolden Laser yethule uhlelo olusika phezulu lwe-laser yokusika izindwangu ezisezingeni eliphakeme ezisika ngokushesha. Ngokuqamba okuqhubekayo, i-Golden Laser ihlala igxile ekwakheni inani eliphakeme lamakhasimende ethu.
Isicelo esijwayelekile se-laser sezingubo zokugcotshwa ezingaphansi
IJersey (ijezi le-basketball, ijezi lebhola lezinyawo, ijezi le-baseball, i-hockey)
Ukugqoka komdanso / ukugqoka kwe-Yoga
Ukusikwa kwe-laser yezingubo eziphrintiwe zemidlalo ephrintiwe
Uhlelo lwe-VISION LASER CUT lusebenzisa inqubo yokusika izingcezu zedayi eziphrintiwe zezindwangu noma zezindwangu ngokushesha nangokunembile, lunxephezela noma yikuphi ukuhlanekezela nokweluka okwenzeka ngezindwangu ezingazinzile noma ezeluliwe njengalezo ezisetshenziswa ezingubeni zezemidlalo.
Ukusikwa kwe-Laser ye-dye-sublimation hockey jersey
0.5mm ukusika ngokunemba
izindleko zokugcina eziphansi
Funda kabanzi mayelana ne-laser cutter
Ukusikwa kwe-Laser yezingubo ezisetshenzisiwe ezingaphansi
IVISion LASER CUT ilungele ukusika izembatho zemidlalo ikakhulukazi ngenxa yekhono lazo lokusika izinto zokweluka futhi ezisontekenteke kalula - uhlobo ngqo oluthola nezingubo zemidlalo (isib. Ijezi leqembu, ihembe lezingubo nokunye)
Iziphi izinzuzo zokusika i-laser?
- Konke kuzenzakalelayo, kubiza kancane
Ukusika ikhwalithi yomkhawulo
Cha, ngenxa yokusebenza kwe-laser engaxhunywanga
Hudula ezintweni ezibonakalayo?
INDLELA UMBONO WOKWENZA KAKHULU WENZA Kanjani?
→ HLOLA EMQOKA
Lula yonke inqubo yokukhiqiza. Ukuzisika okuzenzakalelayo kwendwangu yama roll
Gcina ithuluzi nezindleko zabasebenzi
Ukukhishwa okukhulu (amasethi angama-500 amajezi ngosuku ngokushintshwa - kubhekiselwa kuphela)
Akudingekile amafayela okuqala wemifanekiso
UMSEBENZI WESISEKELO 2
→ AMANQAKU OKUQHATHA ISIBHENGISO
Okokwenzelwa izinto ezithambile okulula ukuhlanekezela, ukunqamula, ukunweba
Ngephethini eyinkimbinkimbi, iphethini le-nesting ngaphakathi kohlaka kanye nezidingo zokusika ngokunemba okuphezulu
Yini Amasu we-Vision Laser System?
Amakhamera we-HD wezimboni
Amakhamera ahlola indwangu, athole futhi aqaphele i-contour ephrintiwe, noma acoshe amamaki okubhalisa futhi asike imiklamo ekhethiwe ngejubane nangokunemba.
Ukusika okuqondile kwe-laser
Ukusika okunembile ngesivinini esikhulu. Imiphetho yokusika ehlanzekile futhi ephelele - akukho ukuhlelwa kabusha kwezicucu ezidingekayo.
Uhlelo lwe-Vision Laser luza ngokuzenzakalela kunoma yikuphi ukuhlanekezela noma ukunwebeka kunoma iyiphi indwangu noma izindwangu.
Uhlelo lomhambisi ne-auto feeder yokufaka i-laser esebenza ngokuzenzakalela ngqo kusuka kumugqa.
Sincoma izinhlelo ezilandelayo ze-laser
embonini yezingubo yedijithali ephrintiwe:
IGolden Laser ibuke kabanzi izimfuno zokucubungula emkhakheni wezingubo zemidlalo, futhi yethule uchungechunge lwezixazululo zokufaka i-laser ezenzakalelayo ukuze ithuthukise ikhwalithi yokufaka yezingubo zezemidlalo, yenza inqubo yokwenza kube lula, ilondoloze umsebenzi omningi kanye nezindleko zesikhathi.
Umbono Ukuskena Umshini wokusika we-Laser
I-Independent Dual Head Camera Laser Cutter
Hlola Machines amaningi we-Laser
"Akukho okushesha ukwedlula lo mshini; akukho lula ukwedlula lo mshini!"
Uhlobo luni lwe-laser?
Sinobuchwepheshe obugcwele bokulungisa i-laser, kufaka phakathi ukusika kwe-laser, ukufakwa kwe-laser, ukufakwa kwe-laser kanye nokumaka i-laser.
Thola imishini yethu ye-laser
Yini impahla yakho?
Hlola okokusebenza kwakho, yenza inqubo ibe ngcono, ahlinzeke ngevidiyo, asebenzisa imingcele nokuningi, mahhala.
Iya kugalari eyisampula
Uyini imboni yakho?
Gxila izimfuno zezimboni, ngezisombululo zemishini ye-laser ezenzakalelayo neqondayo ukusiza abasebenzisi ukuthi bakhule futhi bakhule.
Iya kuzixazululo zezimboni